Ballanqaadyada shirkii Brussels ee dalka Belgium - BBC Somali
Ballanqaadyada shirkii Brussels ee dalka Belgium
Image caption Soomaaliya iyo EU
Lacag gaadhaysa ilaa laba bilyan iyo badh oo dollar ayaa dalalka deeqaha bixiyaa ugu yabooheen dib-u-dhiska Soomaaliya, dhammaadkii shirkii caalamiga ahaa ee magaalada Brussels ee ku saabsanaa taageerada Soomaaliya.
Madaxweynaha dawladda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xassan Sheek Maxamuud waxa uu u sheegay warbaahinta in uu ku qanacsan yahay ilaa iyo haatan ballanqaadyadaasi dhaqaale ee caalamka, soona dhaweynayo. Waxanu ku tilmaamay inay wax ka tari doonto dib-u-dejinta Soomaaliya, ka bacdi tobannaan sano oo qas iyo dagaallo jireen
Ururka Midowga Yurub iyo dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya labaduba waxay ku qanacsan yihiin inay tahay haatan waqtigii ku habboonaa hirgelinta barnaamijyada horumarinta, si looga guuro heerkii gargaarrada bani'aadminnimada oo keliya, marka loo eego horumarka laga samaynayo dhinaca deganaanshaha.
Sida uu sheekay madaxweyne Xassan Sheekh, waxa mudanaanta la siinayaa ugu horrayn wax ka qabashada afar arrimood oo ugu muhiimsan, ayna ka mid yihiin nabadgelyada iyo deganaanshaha, dibuhabyanta caddaaladda, nidaamka xisaabaha iyo hantida dawladda, iyo dib u soo kaabashada dhaqaalaha dalka.
Guddoomiyaha ururka Midowga Yurub Jose Manuel Barroso ayaa isna sheegay in lacagahani dheeraadka ah loogu talo galay in wax lagaga bedelo xaaladaha nololeed ee Soomaalida. Deeqaha haatan lagu yaboohay intooda badan waxa ballanqaaday Ururka Midowga Yurub, iyo dalalka ay ka midka yihiin Denmarka, Germany, Sweden, iyo Ingriiska.
Dhinaca kalena, lacag gaadhaysaa ilaa hal bilyan iyo badh dollar oo Soomaaliya la siiyey sanadihii u dhexeeyey 2008 - 2013 waxa inteeda badani ay ku baxday kharashyada ciidamada nabadilaalinta ee jooga koonfurta Soomaaliya oo tiradooda haatan lagu qiyaasay ilaa 18000